पिसाब पिउनु साँच्चै नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ? जान्नुहोस् ! - Experience Best News from Nepal
पिसाब पिउनु साँच्चै नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ? जान्नुहोस् !
ज्यान नै जोखिममा भएको अवस्थाबाहेक मानिसले आफ्नो पिसाब पिउनेबारे सायद सोच्दैन । तर यस्ता केही मानिसहरु पनि छन् जसले दैनिक रुपमा आफ्नो पिसाब पिउने गर्छन् ।